Jaamacadda SIMAD oo maanta kun arday oo cusub soo dhaweysay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Jaamacadda SIMAD oo maanta kun arday oo cusub soo dhaweysay “SAWIRRO”
Jaamacadda SIMAD ayaa maanta xaflad soo dhaweyn ah u sameysay kun arday oo cusub oo jaamacadda ku soo biirtay sanadkaan, kuwaas oo baran doona takhasusyo kala duwan.
Munaasabad lagu qabtay xarunta weyn ee jaamacadda ee magaalada Muqdisho, waxaa ka soo qeyb galeen macallimiin, waaliddiin, arday iyo marti kale.
“ Muddo dheer ayaan ku hamminayay inaan jaamacad billaabo, maanta ayay ii suurta gashay, waxaan aad ugu faraxasanahay inaan kusoo biiro jaamacadda SIMAD anigoo weliba ka soo baxay dugsi sare, waxaana u doortay waxaan ku qancay kuliyadaha jaamacadan laga dhigo” ayay tiri Fardowsa Maxamed Ciise oo ka mid ahayd ardayda jaamacaddu qaadatay sanadkaan.
Jaamacadda SIMAD waxay bixisaa sagaal kulliyad oo ka kooban 21 takhasus, kuwaas oo ay ardaydu baran karaan, waxaa sii dheer waxbarashada shahaaddada labaad(Master Degree) oo leh takhasusaad kale.
Gudoomiyaha Jaamacadda SIMAD Daahir Xasan Cabdi ayaa yiri “Aad ayaan ugu faraxsan ahay inaad soo doorateen inaad ka mid noqotaan ardayda jaamacaddda SIMAD, soo dhowaaada jaamacada waa jaamacadiina, maanta laga bilaabana waxaad ka mid noqoteen ardayda jaamacadda’’
Jaamacadda SIMAD oo la aasaasay 1999kii, waxay ardayda qaadataa laba jeer sanadkii, ayadoo iminka ay dhigtaan kudhawaad afar kun oo arday.
GAARISA: Ciidanka ammaanka oo hub gacanta ku dhigay
Guddoonka baarlamaanka oo la kulmay qaar ka mid ah ururrada siyaasadeed ee dalka